परिश्रमी मेघा - Artha Nepal
Manoj Thapa — २९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०५:२७0comment
सानैदेखी अरुको दुःखमा सहयोग गर्न पाउँदा रमाउने मेघा चौधरी अहिले पनि गरिब र दुःखी सेवा गर्न पाउँदा पुण्य प्राप्त भएको अनुभुति गर्छिन । सेवा गर्नका लागि धन मात्र होइन मन पनि चाहिन्छ भन्ने उनको मान्यता । नेपालको प्रतिष्ठित व्यवसायीक घराना चौधरी गु्रपले सञ्चालन गरेको नर्भिक इन्टरनेशल अस्पतालको निर्देशक रहेकी मेघा आफ्नो अस्पतालमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुको लागि छुूट्टै बेडको व्यवस्था रहेको बताउँछिन् । सडकमा अलपत्र परेका हुन वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीको लागि उनी भगवान बनेर पुग्ने गरेकी छिन् ।
साधारण स्वभावकी मेघा सब्य र अनुशासित परिवारमा हुर्केकी हुन । इन्टेरियर डिजाइनर बन्ने सपना देखेकी मेघा अहिले नर्भिक अस्पतालकी निर्देशकको रुपमा रहेकी छिन् । तर उनी इन्टेरियर डिजाइनर बन्न नपाए पनि अस्पताल तथा अफिसको इन्टेरियर डिजाइन भने आफै गर्ने गरेको बताउँछिन् । पारिवारिक व्यवसायको कारण उनले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नपाए पनि अहिले गरिरहेको कामबाट पूर्ण सन्तुष्टि मिलेको बताउँछिन् । प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी गु्रपका सदस्य बसन्त चौधरीकी छोरी मेघाले फार्मेसीबाट काम सुरु गरेर अहिले निर्देशक भनेकी हुन । उनका बुबाले उनलाई सिधै निर्देशकको जिम्मेवारी भने नदिएको उनले बताइन । उनी सानो–सानो काम सिकेर अघि बढेकी हुन । जसले गर्दा आज उनले नेपालको चर्चित अस्पतालको नेतृत्व कुशलताका साथ गरिरहेकी छिन् । आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भिरतापूर्वक बहन गरेकै कारण आज नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत नर्भिक अस्पताल लोकप्रिय छ ।
उनले नेपालको चर्चित अस्पतालको नेतृत्व कुशलताका साथ गरिरहेकी छिन् । आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भिरतापूर्वक बहन गरेकै कारण आज नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत नर्भिक अस्पताल लोकप्रिय छ । मेघा सधै काममा विश्वास गर्छिन । ठुलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्ने उनको बानी छ । कहिले पनि आफुलाई ठुलो भएको अनुभुति नहुने उनी बताउँछिन् । जीवनमा जति सहयोग ग¥यो त्यतिनै राम्रो हुने उनको विश्वास छ । अरुको आर्शिवादले नै अझ अगाडी बढ्न हौसला मिल्ने र झन प्रगति हुने विश्वास उनमा छ । त्यहि भएर उनी हरपल अरुको सहयोगको लागि तयार हुन्छिन् ।
मेघा सधै काममा विश्वास गर्छिन । ठुलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्ने उनको बानी छ । कहिले पनि आफुलाई ठुलो भएको अनुभुति नहुने उनी बताउँछिन् । जीवनमा जति सहयोग ग¥यो त्यतिनै राम्रो हुने उनको विश्वास छ । अरुको आर्शिवादले नै अझ अगाडी बढ्न हौसला मिल्ने र झन प्रगति हुने विश्वास उनमा छ । त्यहि भएर उनी हरपल अरुको सहयोगको लागि तयार हुन्छिन् । बुबा बसन्त चौधरीले उनलाई सधै हौसला र प्रेरणा दिने गर्दछन् । वृक्ष जति माथि पुगे पनि झरा देखाउदैन भने जस्तै उनले पनि प्रतिष्ठित व्यापारिक घरनाको सदस्य भएको छनक कसैलाई पनि देखाउँदिनन् । राम्रो काम गर्दै गए पछि पैशा भन्ने कुरा आउँछ, त्यसैले राम्रो कर्म गर्नु पर्ने उनका बुबाले भनेको कुरालाई आत्मसाथ गरेर मेघा अघि बढेकी छिन् ।
परिवारको सहयोगको कारण आफुलाई काम गर्न सहज भएको मेघा बताउँछिन् । आफुले राम्रो काम गरेको कारण परिवारको सहयोग पाएको उनको अनुभव छ । सेवा गर्नु नै ठुलो धर्म भएको मेघा बताउँछिन् । महिलालाई सक्षम बनाएर अघि बढ्न सहयोग गर्नु पर्दछ तर कोटा छुट्याएर मात्र नहुने उनको तर्क छ । अगाडी बढ्नका लागि वातावरण हुनु पर्ने मेघाको बुझाइ छ । सानो भएपनि आफ्नै व्यवसाय गर्न उनी युवाहरुलाई आग्रह गर्छिन । कामलाई सम्मान गर्ने सोचको विकास गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । विदेशमा जति दुःख नेपालमा गर्ने हो भने धेरै सफल हुने मेघा बताउँछिन् । कामलाई आफैले सम्मानित बनाउने हो र काम गर्दा लजाउन नहुने उनी बताउँछिन् ।
जीवनमा उनी सधै खुशी भएको बताउँछिन् । बुबा विरामी भएको क्षण उनको लागि दुःखको क्षण हो । राम्रो कुरामा थोरै पैशा लगायो भने त्यो फर्केर आउँछ । त्यसैले दुःखी गरिबलाई सहयोग गर्न उनी आग्रह गर्छिन ।
काठमाडौं र भारतमा उच्च शिक्षा लिएकी उनी काम र परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नभएको बताइन । श्रीमान्, सासुससुरा, छोरी र देवरको साथ खुशी जिवन विताइरहेकी छन् ।
प्रस्तुति : मनोज थापा
रूपन्देहीमा ७ वर्षीय बालिका बलात्कारको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
नेपाल मर्चेण्ट बैंकर्स संघको अध्यक्षमा ध्रुव तिमिल्सिना निर्वाचित
नेपाल बैंकर्स संघको कार्य समिति सदस्यमा तीन जना बैंकर निर्बिरोध निर्वाचित
युवा व्यवसायी तथा पेजेन्ट निर्देशक पोखरेल सम्मानित
सगरमाथा म्युजिक अवार्डको उत्कृष्ट पाँच सार्वजनिक (नामसहित)
मिसेस नेपाल इन्टरनेशनल २०१८ को उपाधी चन्दा थापा गिरीले जितिन्
चावहिलमा हरेक हप्ता रगत संकलन हुने
सार्वजनिक सवारीमा सरकारले तोकेको नयाँ भाडादर यस्तो छ ( सूचीसहित)
दैनिक पाँच शव आउँछन् विदेशबाट
प्रभु ग्रुपको डिजिटल वालेट ‘प्रभु पे’ सुरु
पोखरामा क्याम्बियम नेपाल रोड शो २०१८ सम्पन्न
१० आश्विन २०७५, बुधबार २१:०६
१७ आश्विन २०७५, बुधबार १५:०२
१० आश्विन २०७५, बुधबार १५:४३
१३ आश्विन २०७५, शनिबार ०७:४२
१० आश्विन २०७५, बुधबार १७:०४
Responsive Media Pvt.Ltd.
Basundhara, Kathmandu Nepal
Phone : 9851194239/9801097552
Online Reg. : 266/073-074
Company Reg. : 140509/ 072/073
Managing Director : Mahesh Thapa
Director : Kushal Khatri, Sita Sapkota
Editor In Chief : Manoj Thapa
© 2018 Artha Nepal